UMotlanthe uthi uBukhosi bukaZulu abemukwe umhlaba – Ubukhosi
Home/ Ubukhosi noMhlaba/UMotlanthe uthi uBukhosi bukaZulu abemukwe umhlaba
Umbiko uthi akuphele nge-Ingonyama Trust umhlaba ulawulwe nguNgqongqoshe
Seligcine liphumile iqhina embizeni odabeni lomhlaba woBukhosi KwaZulu-Natal. Lokhu kulandela isiphakamiso esenziwe yikomidi elikhethekile eliholwa yilowo owaye yiSekela Mengameli wezwe kanye nokaKhongolose, uMnu uMotlanthe. Umqulu ongamakhasi angama- 601 obizwa ngeReport of the High Level Panel on the assessment of key Legislation and the Acceleration of Fundamental Change, uphakamisa ukuthi kuqedwe uMthetho Ingonyama Trust we-1994. Lo Mthetho nowaba ngumthetho wokugcina owashaywa nguHulumeni wakwaZulu unika uBukhosi (ngaphasi kweSILO) amandla okwengamela umhlaba woBukhosi KwaZulu-Natal. Lo mhlaba wabe uhlanganisa izindawo zakobantu, lezo ezisemakhaya ezibhekwe ngaMakhosi ezizwe kanye nalezo ezisemalokishini. Phakathi kwamalokishi ayebaliwe kwakuyi-KwaMakhutha, uKwaMashu, Umlaza, eMagabheni, KwaNdengezi, iMpumalanga, iWembezi, Ezakheni, Osizweni, iMadadeni, eSikhaleni, iNgwelezane, uSundumbili, iGezinsila, iNseleni, kwaMsani neGamalakhe. Amanye kuhambe kwahamba aphuma emuva kwesivumelwano.
Okugqamayo ngalo mthetho nangalezi zindawo wukuthi kwakungesona isipho esabe sinikwa ISILO noma uZulu kepha lokhu kwabe kulithonsi nje enhlabathini eyemukwa kwaboHlanga ngezikhathi zamaKoloni kanye noHulumeni wobandlululo.
Kuyithathe izinyanga ezingama-21 ukuba lolu hlaka luphume nalesi siphakamiso kulandela ukujutshwa kwalo yiSithangami soSomlomo (Speakers Forum) ngenhloso yokubuyekeza imithetho eshaywe ngale kwenqubo yobandlululo. Okungeyona imfihlo wukuthi kuphunywe nayo iqhubu nje Ingonyama Trust ngoba bekunombono wokuthi ‘ayihambisani nalokho okwenzeka kwezinye izingxenye zezwe’. OZul’azayithole babike kabanzi ngalo mbono nobuphinyiswa phakathi kwabanye osopolitiki abanye abavela KwaZulu-Natal.
Oshicilelweni lwamhla zi-2 kuya zili-10 kuMfumfu ngowezi-2004 ngaphansi kwesihloko esabe sithi: Imizamo yokugudlula Ingonyama Trust, leli phephandaba lacaphuna umthombo owabe usemhlanganweni lapho udaba ‘lokusebenza’ Ingonyama Trust. Umthombo oyilungu lePhalamende wathi: “Iqiniso lithi izinkulumo zokuthi ingaqedwa kanjani le nto ye-Ingonyama Trust ayiqali manje. Kepha manje isivuswa yisimemezelo seSILO sokuthi akubuyiselwe umhlaba eBukhosini. Le nto (ukubuyiselwa komhlaba eBukhosini) iyasikhathaza ngoba asazi ukuthi izokwenzeka kanjani. Angingabazi ukuthi le nto (Ingonyama Trust) ngabe kade yaphela, manje inkinga wukuthi ukuyidudula kuzobe sengathi kungukulwisana neSILO uqobo,” kuphetha umthombo.
Ngakolunye uhlangothi akuyona imfihlo ukuthi Ingonyama Trust ingumzondwa ukwedlula ezinye izinhlaka ezakhiwa nguHulumeni waKwaZulu ezifana ne-Ithala. Ophenyweni loZul’zayithole okwavela wukuthi cishe zintathu izizathu noma abantu abanenkinga ne-Ingonyama Trust. Ingxenye yokuqala ngosopolitiki baKwaZulu-Natal abanombono wokuthi lolu hlaka kumele lwenganyelwe yisifundazwe hhayi uzwelonke njengoba kwenzeka. Ngokwenqubomgomo Ingonyama Trust ibika ePhalamende eKapa kanti ukusebenza kwayo kungabhekelelwe nguNgqongqoshe uNkwiti Wezemihlaba Nentuthuko Yezindawo ZaseMakhaya. Akuyona nemfihlo ukuthi abanye kubaphathi bomasipala basola Ingonyama Trust ngoku“vimba intuthuko”. Lokhu kwafakazelwa yisethulo ngekhompyutha (powerpoint presentation) esenziwa ngosopolitiki baKwaZulu-Natal kweminye yemihlangano yeqembu elibusayo.
Ithimba likaMotlanthe lona phakathi kwezinto elisola ngazo Ingonyama Trust nokulenze laphakamisa ukuthi ayiqedwe wukuthi ubukhona bayo benza lesi sifundazwe iKwaZulu-Natal sehluke kwezinye. Okunye lesi sakhiwo soBukhosi sisolwa ngokungabi uhlelo lokubika nokuzibophezela ngokwedemokhrasi okuqondile, Ngalokhu ithimba libhale lathi: ISigungu siphakamisa ukuqeda uMthetho We-Ingonyama Trust ukuze iKwaZulu-Natal ihambisane nenqubomgomo yezwe ngelomhlaba, nokuthola indawo yokuhlala yemiphakathi nezakhamuzi ezithintekayo. Uma isiphakamiso singafezeki masinyane, kufanele kube nezichibiyelo ezibanzi. Kufanele batholele abantu amalungelo endawo abathintekayo, baqinisekise ukuthi umhlaba unikezwa umuntu noma uhlaka olunokuzibophezela ngokwedemokhrasi.”
Ithimba likaMotlanthe liphakamisa ukuthi ISILO noZulu baphathelwe umhlaba nguNgqongqoshe okuyinto osomlando abayibuka njengesenzo esedlula leso esenziwa ngamaKoloni noHulumeni wobandlululo.
UMthetho Wokuchitha kufanele uhlinzeke ukuchithwa kwe-Ingonyama Trust Act we-1994 kanye nokubhidliza nokuqeda kwe-Ingonyama Trust. Kufanele kufake ukuhlinzeka kokwedluliswa komhlaba we-Ingonyama Trust, izimpahla, izikweletu, ilungelo nomthwalo kuNgqongqoshe ophathelene nezindaba zomhlaba.
Emlandweni kaZulu ukukhuluma kokwemukwa komhlaba nokunqindwa amandla koNgangezwe lakhe odabeni oluthinta umhlaba kwabe kuhunyushwa ngendlela eyodwa. UZulu lokhu wabe ukuthatha njengokuqhwagwa kombuso nokujivaza iSihlalo nesimiso salokho okunguZulu. Lokhu kuhumusha yikho okwenza eminyakeni eli-134 eyedlule ngalo nyaka eSandlwana amadelamzimba kaZulu ayethi okaNdaba uqalwa engaqale muntu. Afa efela iSihlalo. Inxeba nanamuhla elingapholile kwaba yilokho okwenzeka ONdini ngonyaka we-1879 mhla zizi-4 kuNtulikazi lapho abafo babhubhisa khona iSigodlo ngomlilo. Okwaba yisilonda kakhulu wukuthi emuva kwalokho uZulu wonkana wabe usubuswa yimithetho yezizwe eyabe ingahambisani nesikompilo kanjalo nesimiso soBukhosi bukaZulu.
Ukuphuma kombiko wethimba likaMotlanthe neziphakamiso zalo kushiya imibuzo ekutheni uBukhosi noZulu bazowuhumusha kanjani. Sikhuluma ngonyaka we-2014 kuMandulo ngosuku lomgubho ngempilo yeLembe, ISILO sathi: “Sesiyazi ngemihlangano ebanjwa lonke izwe leli edingida ngesicelo sikaZulu esisodwa. Siyazi futhi ukuthi kumunyungwa umkhankaso wokunxenxa amaqembu ezombusazwe ePhalamende ukuthi achibiyele umthetho noma kuqedwe iBhodi le-Ingonyama Trust”, kuhlonza iMbube. Umbiko wethimba eliholwa nguMotlanthe awushayanga eceleni kulokho okandaba ayekubikela isizwe.
INdlondlo yexwayise uMotlanthe ne-ANC
Ubuholi beqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) obebuholwa nguMengameli omusha uMnu uRamaphosa nobekuyokotha ISILO koMkhulu Osuthu buthole isifundo neseluleko sobumqoka bomhlaba kuZulu. Lokhu kulandela ukuvela kwemibiko yokuthi iKomiti ebeliholwa yilowo owayenguSekela Mengameli, uMnu uMotlanthe liphakamise ukuthi iqedwe iNgonyama Trust, ISILO esingumnikazi wayo.
“Kumele nikuqonde ukuthi yize igama eseliqhakanjiswa kuwudemokhrasi, thina umzabalazo wethu kawuqalanga ngokulwela lokho kepha into eyabe iphambili kwakuwumhlaba yikho nesiqubulo se-ANC sasithi ‘Mayibuye i-Afrika’. Yebo kukhona okuhle esakuthanda kudemokhrasi kepha umongo wethu kwabe kungumhlaba, kuchaza iNdlondlo.
OMdala uqhubeke wathi: “Engizama ukukusho lapha wukuthi uHulumeni oholwa nguKhongolose kungaba yihlazo ukuthi ube namalimi nxa kumele ukhulume ukuthi umhlaba ubuya kanjani. Yize singakethulelwa ngokusemthethweni nokumangalisayo, sizwile ukuthi kukhona umbiko okhishwe nguMnu uMotlanthe ohlongoza ukuthi uBukhosi bemukwe umhlaba. Njengoba ngisho asikabikelwa ngokusemthethweni kepha uma ngabe lokho kuliqiniso kuyosho khona ukuthi abasho njalo kabawazi umlando kaKhongolose.”
ISILO sibe sesichaza ngobumqoka bomhlaba kuZulu naseBukhosini. “Uma nje ngingakhulumela eleNdlovukazi uMthaniya lona elakhiwa ngezingazi zamadoda namakhosikazi kaZulu angikusho nje ukuthi lapha uBukhosi ungeke ukwehlukanise nomhlaba. Empeleni umhlaba ungumphefumulo womzimba owuBukhosi. Angeke nangelilodwa ilanga sivume ukuba sibulawe ngokuthi kuthathwe umphefumulo wethu. Sakuphikisa lokho kumaKoloni, sakuphikisa nani Khongolose nakuHulumeni wobandlululo, ningasijikeli esiswini njengotshwala ngoba sesibagudluzile abafo, kuphetha Ongangezwe Lakhe.
Ungubani ohlanganise lo mbiko okhuluma ngomhlaba
LO mqulu uhlanganiswe uNkk u-Aninka Claassens ngokomlando wakhe okuvela ukuthi uneminyaka engama 25 elandela izindaba ezithinta umhlaba futhi ubephinde enze ucwaningo iRural Women’s Action Research Project. Waqala ukusebenzi ezinyunyaneni engumgqugquzeli. Ngeminyaka yama 80‘s wasondel;ana kakhulu nomphakathi wasezindaweni zasemakhaya lapho umphakathi wawulwa nokususwa ezindaweni ezithile.
Kusukela ngonyaka we-1990 wayengumcwaningi osemnkantshubomvu kuLand Rights Project esikhungweni iCentre for Applied Legal Studies eNyuvesi iWits. Ngesikhathi iNingizimu ishintsha izandla kuHulumeni wabamba iqhaza kwezinye izinhlelo njengokubhalwa kwemithetho ephathelene nokuvikelwa kwabasebenzi basemapulazini nabantu ababesebenza khona. Wayeyilungu le-ANC elalibheka izindaba zomhlaba futhi engungcweti ezindabeni zomhlaba kuMthethosisekelo wezwe.
Phakathi kowe1997 kuya kowe 1999 wayenguMeluleki kaNgqongqoshe Wezemihlaba lapho phakathi kokunye wayegxile ekwenzeni imithetho ethinta amalungelo omhlaba futhi kunguye osekhaleni lezingxoxo zomhlaba. Eminye yemisebenzi yakhe ukwenza ucwaningo ngomhlaba ezindaweni zasemakhaya esebenzisana nezikhungo zemfundo ephekeme.